DASTUURKA FEDERAALKA SOOMAALIYA PDF
Published by admin on June 7, 2021
Markaas Soomaaliya qeyb qeyb ayay ahayd oo laba gobol ayaa dowlado dhistay Dastuurka Qabyada ah wuxuu siinayaa dowlada federaalka in tilaabooyin. Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka sheegay: “waxaan diidannahay falal aanu u aragnay in ay dastuurka ka soo. Gujin Fudud. Dastuurka Qaranka. Miisaaniyadda Ka. Ururka Haweenka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Golaha Shacabka Aqalka Sare.
Author: Shazuru Dagami
Nidaamka Federaaliga iyo Qaranimada Soomaaliya – BBC News Somali
Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo federaalkw Madaxweynaha. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano. Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha 1 Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo ama laga qaado xilka, madaxweyne-ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.
Waxaa loo qaateen ah in macnaha laga wado Djibouti iyo gobolada looga hadlo af Soomaaliga ee wadamada jaarka ah. Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. Waxaa laga keenay ” https: Waxaa jiray shirar is daba joog ah oo ay yeelanayeen golaha wasiirada Galmudug oo la doonayo in lagu xaliyo khilaafka ka dhaxeeya hoggaanka maamulka sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta Galmudug Maxamuud Aadan Cusmaan Masagawaa.
Qormadan tii ka horeysay ee ay BBC-da ka qortay arrintan ayaa waxa ay ku sheegnay in ay jirto saansaan ah in muranka laga yaabo in uu u talaabo baarlamaanka. Qodobka 96aad-Doorashada Madaxweynaha iyo Madxweyne Ku- Xigeenka 1 Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaa si toos ah u doran doono dadweynaha.
Dalalka kale Adlas Siyaasadda portal. Soomaaliya Waxay leedahay Baasaboor Elektaroonik ah inkastoo kaydka macluumaadka ama Serverka kaydiya Macluumaadka uu yaalo Imaaraatka Carabta Wali Awood uma helin laanta Socdaalka in ay usoo wareejiso Soomaaliya. Bishii June maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa sidoo kale kasoo horjeedstay xeerka isgaarsiinta qaranka oo golaha wasiirada meelmariyeen, waxayna maamulada sheegeen in dowladda federaalka ay hareermartay waxyaabihii horey looga heshiiyay ee xeerkan ku saabsanaa oo dhan.
GALAXY 170S PDF
Dastuurka kumeel gaarka ah.
Dowlad goboleedyo cusub ayaa laga dhisi karaa dhulka ku yaala jamhuuriyada gudaheeda markii ay daruufo jiraan. Golaha wasiirada Soomaaliya oo ka shiray Khilaafka Khaliijka. Xaaf markii uu garoonka Cadaado kasoo dagayay waxaa loosoo dhaweeyay si aanan horay loo arag, waxaana hareertiisa ka muuqday guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Galmudug oo ahaa ninkii shir guddoomiyay kullankii baarlamaanka federaaloa xilka looga qaaday madaxweynihii hore Cabdikariim Xuseen Guuleed.
Muxuu Khilaafka Khaliijka u gilgiley nidaamka federaalka Soomaaliya?
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah kuwa mooshinka gudbiyay ayaa sheegay: Kadib markii lasoo xulay Xubnaha Baarlamaanka Ayeey waxay doorteen Gudoomiyaha Baarlamaanka ama Afhayeen, waxay markale duurteen Madaxweyne oo isgana sii xushay Raiisul wasaare, Sidaas ay dawladdu ku tahay Baarlamaani oo wax walba Baarlamaanka ayaa soo go’aaminaya.
Mooshinka xildhibaanada ayaa ka dambeeyay kadib markii qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ay sheegeen in dowladda ay qaadato go’aan ay ku taageereyso isbeheysiga Sucuudiga ee go’doominta ku haya dalka Qadar. Lahaanshaha sawirka Madaxtooyada Soomaaliya Image caption Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalaya caleemo-saarka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf Murankii ka dhashay moowqifka dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka dowladaha khaliijka iyo kan ay ka qaateen dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa cirka isku dastuurk shareeraya, markastana waxaa kasoo kordhaya wax cusub oo arrimaha sii murjinaya.
Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada. Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli soomaaliyz bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo.
Qodobka aad-Golaha Wasiirada 1 Madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa Gole Wasaaradeed aan ka badnayn 23 xubnood oo ay ku jiraan Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenku kuwaa oo aan ka mid aheyn xubnaha labada aqal. Nidaamka Federaaliga iyo Qaranimada Soomaaliya 7 Sebtembar Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta. Madaxweyne Axmed Ducaale Gelle, Xaaf, ayaa taageeray go’aanka xulufadaha Sucuudiga, halka madaxweyne ku xigeenka Maxamed Xaashi Cabdi “Carabeey” iyo goddoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir ay taageereen go’aanka dowladda federaalka iyaga oo cuskaday qodobka aad ee dowladda dhexe siinaya awoodda ay go’aan uga gaari lahayd siyaasadda arrimaha soimaaliya.
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo xukuumadda, waana astaanta midnimada Qaranka.
Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Feederaalka 1 Musharraxa Madaxweynenimada ama ku-Xigeenka Madaxweynaha waxaa soo jeedin karaa xisbiyada siyaasadeed ama wuxuu noqon karaa Musharrax madax-bannaan. Arrintaas ayaa hadda si rami ah u dhacday kadib markii xildhibaano ay mooshin ka gudbiyeen Safiirka imaaraatka carabta ee Soomaaliya u jooga, oo ay ku eedeeyeen in uu farogalinayo arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Dawladda federaalka Soomaaliya
Maqal Xal ma laga gaari doonaa khilaafka waddamada Khaliijka? Marka waa in ay noola dhaqanto qaab dowladeed, ee aysan noola dhaqmin sida qabaa’il iska firirsan oo aan dowlad dhexe lahayn”, ayuu yiri xildhibaan Zakariye oo BBC-da la hadlay. Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci dastujrka gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada.
Wassiirka dastuur,a magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska. Banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo go’aanka madaxweyne Xaaf dastuurkx lagu qabtay meelo ka mid ah Galmudug, loogana soo horjeedo moowqifka dhexdhexaadnimada ee dowladda dhexe. Waxaa sidoo kale lagu soo dhaweyn karaa in jiritaano kale lagu soo dhaweeyo in ay ku soo biiraan Federaalka, waa hadii ay doonayaan.
Fikradani waxay kaga timid dastuurka markii ugu horeysay Xeerkii Kumeel Gaarka ahaa ee la qoray sanadkii Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed.
DIBOKO TSA BASOTHO PDF
IRLEMAR CHIAMPI PDF
BIOKEMI AF VIBEKE DINESS BORUP PDF